အဘဖေါ ရဲ့ နယူးဇီလန်သွား Cruise တောလား – ၈ ( Galley Tour ) ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » အဘဖေါ ရဲ့ နယူးဇီလန်သွား Cruise တောလား – ၈ ( Galley Tour ) ။
အဘဖေါ ရဲ့ နယူးဇီလန်သွား Cruise တောလား – ၈ ( Galley Tour ) ။
Posted by Foreign Resident on Feb 26, 2014 in Travel | 22 comments
Cruise တောလား – ၈ ( Galley Tour ) ။
၁၃ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ။
ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံးတော့ သင်္ဘောဟာ ဘယ်ဆိပ်ကမ်းကိုမှ မကပ်ဘဲ ၊
Tauranga ကနေ Wellington မြို့ ကို ခုတ်မောင်းမှာပါ ။
တောက်လျှောက် ပင်လယ်ထဲမှာပါ ။ ကမ်းနား သွားဖို့ မရှိဘူးပေါ့ ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ ဘာလုပ်နေပြီး အချိန်ဖြုန်းရင် ကောင်းမလဲလို့ ၊
သတင်းလွှာ ၁ ။ ဒီနေ့ နှင့် မနက်ဖြန် ရဲ့ Activities & Events တွေမှာ ရှာကြည့်ပါတယ် ။
နံနက် ၁၀ နာရီ ခွဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ Galley Tour မီးဖိုဆောင် လေ့လာရေး ခရီးစဉ် ၊
ဆိုတာကိုတွေ့ရလို့ ၊ အဲဒီကိုဘဲ သွား လေ့လာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။
8 နံနက် ၁၀ နာရီ ခွဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ Galley Tour မီးဖိုဆောင် လေ့လာရေး ခရီးစဉ် ။
8 နံနက် ၁၀ နာရီ ခွဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ Galley Tour မီးဖိုဆောင် လေ့လာရေး ခရီးစဉ်
အဲဒါနှင့် ၊ Tour စမယ့် Grand Epernay3ဆိုတဲ့ Restaurant ကို ၊
နံနက် ၁၀ နာရီ ခွဲ အရောက် သွားလိုက်ပါတယ် ။
( အဲဒီမှာ ၊ လူတိုင်းကို ကြိုဆိုတဲ့ အနေနှင့် ၊
Welcoming Drink ရှန်ပိန် / အအေး တိုက်ဧည့်ခံ တယ်လေ )
ပထမ ဦးဆုံး သင်္ဘောရဲ့ Food & Beverage Director Mr. Martin Fouler ၊
( သူ့ရဲ့ ရာထူးကတော့ ၊ ရွှေချောင်း ၃ စင်း နှင့် ၊
Food & Beverage Department ရဲ့ Head of Department ပါ )
က မိတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီး ၊ သူ့ F & B Department ရဲ့ ၊
သင်္ဘောပေါ်မှာ လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ ကို ပြောပြပါတယ် ။
8 သင်္ဘောရဲ့ Food & Beverage Director, Mr. Martin Fouler ။
8 သင်္ဘောရဲ့ Food & Beverage Director Mr. Martin Fouler
အဲဒီနောက် ၊ သူ့ရဲ့ F & B Dept အောက်က Chef ( Chief Cook ) တွေနှင့် ၊
အဘ တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါတယ် ။
သူ့ လက်အောက်က ရာထူး အကြီးဆုံး Cook ကတော့ ၊
Executive Chef သြဇီ လူမျိုး Geoffrey Haviland ပါ ။
Executive Chef ဟာ ရာထူးအနေနှင့်ကတော့ ရွှေချောင်း ၃ စင်း အတူတူပါဘဲ ၊
ဒါပေမယ့် အုပ်ချုပ်မှု အနေနှင့်ကတော့ Food & Beverage Director ရဲ့ အောက်ကပါ ။
8 F & B Dept အောက်က Chef ( Chief Cook ) တွေ ။
8 F & B Dept အောက်က Chef ( Chief Cook ) တွေ
ပထမဦးဆုံး သူတို့ ဋ္ဌာန ရဲ့ လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ ကို ရှင်းပြပါတယ် ။
သူတို့ Food & Beverage Department ရဲ့ အဓိက ပထမ ဦးစားပေးဟာ တဲ့ ၊
ထမင်း ဟင်း အဖျော် ယမကာ တွေ အရသာရှိတာ မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး တဲ့ ။
သင်္ဘောပေါ်က ခရီးသည်တွေ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော အစရှိတဲ့ ၊
ရောဂါပိုးတွေ မကူးစက်ဘို့ သန့်ရှင်းရေး ကို အထူး ဂရုစိုက်ရတာပါတဲ့ ။
( ခရီးသည် ၂၈၀၀ ကျော် နှင့် ဝန်ထမ်း ၁၂၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာ ၊
ကူးစက်ရောဂါ တစ်ခုခု Out Break ဖြစ်လိုက်လို့ကတော့ ၊ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ )
သန့်ရှင်းရေး နှင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်မှု ကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်သလဲဆို ၊
အဘ မှတ်မိသလောက်ထဲက နမူနာ တစ်ချို့ ပြောပြရရင် ။
သင်္ဘော စထွက်ထွက်ချင်း ၊ ၇၂ နာရီ / ၃ ရက် အတွင်းမှာ ၊
Restaurent တွေထဲက စားစရာ ( ထမင်း / ဟင်း / မုန့် ) တွေကို ၊
ခရီးသည် ကိုယ်တိုင် ထိကိုင် ဖို့ မပြောနှင့် ၊ ဇွန်း နှင့် ခပ်ယူခွင့်တောင် မပြုပါဘူး ။
ခရီးသည် စားချင်တဲ့ အစားအစာကို Waiter Waitress တွေကဘဲ ခပ်ပေးပါတယ် ။
8 စားစရာ ( ထမင်း ဟင်း မုန့် ) တွေကို ဇွန်း နှင့် ခပ်ယူခွင့်တောင် မပြုပါဘူး ။
ခရီးသည် တွေကို တည်ခင်းတဲ့ ဘယ်စားစရာကို မဆို ၊
ချက်ပြီးတဲ့ အချိန်ကနေ ၄ နာရီအတွင်း မကုန်ရင် လွှင့်ပြစ်ရပါတယ် ။
ပုံထဲမှာ သူတို့ရဲ့ မီးဖိုချောင် Galley ထဲက အမိန့် ညွှန်ကြားလွှာ Time Control Plan ပါ ။
Set Up Time ချက်ပြီးတဲ့အချိန် နှင့် Discard Time လွှင့်ပြစ်ရမယ့်အချိန် ရေးထားပါတယ် ။
8 ဘယ်စားစရာ မဆို ချက်ပြီးတဲ့ အချိန်ကနေ ၄ နာရီအတွင်း မကုန်ရင် လွှင့်ပြစ်ပါတယ် ။
နေရာအနှံ့မှာ Purell လို့ရေးထားတဲ့ Hand Cleaner / Gel Dispenser တွေ ရှိပါတယ် ။
အဲဒီအောက်မှာ လက်ခံလိုက်ရင် Automatic လက်ဆေးတဲ့ Gel လေးတွေ ကျလာပါတယ် ။
အဲဒီ Gel တွေနှင့် လက်အနှံ့ ကို ပွတ်လိုက်ရင် ပိုးသတ် သန့်စင်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ် ။
ရေ နှင့် ထူးပြီး ထပ်ဆေးစရာ မလိုတော့ပါဘူး ။
အဲလို Gel Dispenser တွေကို နေရာ အနှံ့မှာ တပ်ဆင်ထားပေးပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် စားသောက်ခန်းတွေရဲ့ အဝင်ပေါက်တိုင်းမှာ ရှိပါတယ် ။
အဲဒီ အပြင် စားသောက်ခန်းတွေရဲ့ အဝင်ပေါက်တိုင်းမှာ ၊
Waiter / Waitress တစ်ယောက်စီက ကြိုဆို နှုတ်ခွန်းဆက်ရင်း နှင့် ၊
လက်ထဲကို အဲဒီ Gel လေးတွေ Manual ကိုယ်တိုင်လဲ လိုက်ဖျန်းပေးပါတယ် ။
8 နေရာအနှံ့မှာ Purell လို့ရေးထားတဲ့ Hand Cleaner Gel Dispenser တွေ ရှိပါတယ် ။
8 နေရာအနှံ့မှာ Purell လို့ရေးထားတဲ့ Hand Cleaner Gel Dispenser တွေ ရှိပါတယ်
Buffet Dining Room ထဲက Beverage Corner မှာ အပူ အအေး သောက်စရာ စက်တွေ ရှိပါတယ် ။
အဲဒီ အအေး စက်လေးပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ၊ ” Please do not reuse your glass ” ဆိုတာ ၊
အခု တွေ့ရတဲ့ ၊ ဆေးထားပြီးသား ဖန်ခွက် အပြာ ထဲကို အအေးထည့်ယူသွားပြီးရင် ၊
ကိုယ့် ပါးစပ် နှင့် ထိသောက်ပြီးတဲ့ ( ပိုးတွေ ပါလာနိုင်တဲ့ ) အဲဒီ ဖန်ခွက် အပြာ ကို ၊
ဒီ အအေးစက် ဆီကို ပြန်ယူလာပြီး ၊ နောက်တစ်ခါ အအေး ထပ်ထည့်ခွင့် မပြုတော့ပါဘူး ။
နောက်တစ်ခါ အအေး ထပ်ထည့်ချင်ရင် ၊ နောက် ဖန်ခွက် အသစ် ကို သုံးရပါမယ် ။
8 Buffet Dining Room ထဲက အပူ အအေး သောက်စရာ Beverage Corner ။
8 နောက်တစ်ခါ အအေး ထပ်ထည့်ချင်ရင် ၊ နောက် ဖန်ခွက် အသစ် ကို သုံးရပါမယ် ။
သူတို့ ဋ္ဌာန ရဲ့ လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ ကို ရှင်းပြပြီးတဲ့နောက် ၊
ဧည့်သည်တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖိတ်ခေါ် ဖြေကြားပေးပါတယ် ။
ပြီးတဲ့ အခါမှာ အဘ တို့ကို အုပ်စုခွဲပြီး ၊
သူတို့ဆီက Chef တစ်ဦးစီက ဦးဆောင်ခေါ်ပြီး ၊
သင်္ဘော ရဲ့ မီးဖိုချောင် Galley ထဲကို လှည့်လည် ရှင်းပြပါတယ် ။
8 မီးဖိုချောင် Galley ထဲမှာ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း နှင့် ရှင်းသန့်နေပါတယ် ။
8 မီးဖိုချောင် Galley ထဲမှာ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း နှင့် ရှင်းသန့်နေပါတယ်
8 အစားအသောက် ပုံဖေါ် အလှပြင်တဲ့ နေရာပါ ။
အဘ တို့ နိုင်ငံတကာသွား ကုန်သင်္ဘောတွေ လိုက်နာရတဲ့ ဥပဒေ နည်းလမ်းတွေ နှင့် ၊
သူတို့ ခရီးသည်တင် Cruise သင်္ဘောတွေ လိုက်နာရတဲ့ ဥပဒေ နည်းလမ်းတွေ နှင့် ၊
အများအားဖြင့်ကတော့ အတူတူပါဘဲ ။ သူတို့ ပိုလဲ / ကွာလှလဲ နဲနဲပါ ။
အဲဒီတော့ အဘ အတွက် ကတော့ ၊
သူတို့ဆီက မီးဖိုချောင် Galley ၊ Pantry ၊ Store room တွေ ၊
သန့်ရှင်းတာ ၊ သပ်ရပ်တာ ၊ စံနစ်ကျတာတွေ ၊
လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင် OHS လုပ်ထားတာတွေ ၊
အဘ အမြင်မှာ ဘာမှ မထူးဆန်းလှပါဘူး ။
ဥပမာအားဖြင့် ဓါတ်ပုံထဲက မီးဖိုချောင် Galley ကြမ်းပြင်မှာ ၊
အနက်ရောင် ရာဘာပြား အထူကြီးတွေ ခင်းထားတာ တွေ့လား ၊
အဲဒါက လျှပ်စစ် ဓါတ်အား နှင့် ကိုင်ထိ နိုင်တဲ့နေရာတွေရဲ့ အောက်တည့်တည့် ဘဲ ၊
လူတွေကို ဓါတ်မလိုက်အောင် ရာဘာပြား အထူကြီးတွေ ခင်းထားတာ ။
အခြေခံ ဥပဒေ နည်းလမ်းတွေက အကုန် အတူတူပါဘဲ ။
သေချာလိုက်ကြည့်ရင် သုံးတဲ့ စက်တွေကအစ အမျိုးအစား အတူတူ ပါဘဲ ။
8 ဟင်းတွေ မရောကုန်ဖို့ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်း ချက်နည်းတွေကို ပုံ နှင့် တကွ ပြထားပါတယ် ။
8 အမျိုးအစားတူတဲ့ ဟင်းခွက်တွေကို တစ်ပြိုင်တည်း ကြိုပြင်နေပုံပါ ။
အဲ ၊ အဲဒီမှာ အဘ အဓိက အံသြမိတာ တစ်ခုဘဲ ရှိပါတယ် ။
သူတို့ မီးဖိုချောင် Galley ကြီးက အရမ်း ကျယ်ဝန်းသလောက် ၊
ဝန်ထမ်း Chef / Cook အတော်နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ် ။
( အဲဒီတော့ Chef တွေ နေရာ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း နှင့် ချက်ရတာပေါ့ )
ဒီလောက် လူအများကြီး ( ခရီးသည် ၂၈၀၀ ) စားဖို့ ကို ၊
ဒီလောက် လူနည်းနည်းလေး နှင့် ချက်နိုင်တာ အံ့သြမိပါရဲ့ ။
အဘ တွေ့ခဲ့တာ Chef ကော ၊ အကူပါ ၊ ၂၀ / ၃၀ လောက်ဘဲ ရှိမယ် ။
8 မီးဖိုချောင် Galley က အကျယ်ကြီးပါ ၊ လူအများကြီး ကျပ်ညပ် မနေပါဘူး
8 ဒါကတော့ မီးဖိုချောင် Galley ထဲက ပစ္စည်းထားတဲ့ Store Room ။
မီးဖိုချောင် Galley ကို ကြည့်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ၊
Silk Harvest Asian Restaurant ကို ခေါ်သွားပြီး ၊
ဟင်းပွဲ ပြင်ဆင်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကိုပါ ထပ်ရှင်းပြပါတယ် ။
( ဟဲ ဟဲ ရှင်းပြပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ဟင်း မြည်းကြပါတယ် )
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ 1 ။
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ 1
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ2။
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ 2
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ3။
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ 3
အဘ တို့လဲ ၊ အဲဒီက ဟင်းတွေ နဲနဲစီ မြည်းကြည့်ပြီးတော့ ၊
အပြန်မှာ တစ်ခါတည်း Buffet Restaurant ဝင် ၊
နေ့လည်စာစားပြီး အခန်း ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ် ။
8 တစ်ချို့ကတော့ ရှင်းပြတာ စိတ်မဝင်စားလှဘဲ မြည်းကြည့်ဖိုဘဲ စိတ်ဝင်စားကြတယ် ။
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ4။
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ 4
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ5။
8 ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ 5
ကိုယ့်မှာတော့ မီးဖိုချောင်သေးသေးလေးမှာ ချက်ပြီးရင် ချက်ရတာနဲ့ မကာမိအောင် ပြန်သန့်ရတာ။
ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဗမာ မို့လားမသိ။
အလှဆင်ထားတဲ့ တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်း အစားအသောက်ကို မခံစားတတ်ဘူးရယ်။
အဲဒီ စန်နီတိုင်စာ ကတော့ ဒီမှာ ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေမှာ နေရာတိုင်းထားတယ်။
ဆပ်ပြာမလို ရေမလို လက်သုတ်ပဝါ မို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံလိုသွားရင် အံကိုက်ပဲ။
ခဏ ခဏ ဆေးရင်တော့ လက် အရေပြား အသားအရည်ခြောက်တယ် ဆိုလားပဲ။
” ခဏ ခဏ ဆေးရင်တော့ လက် အရေပြား အသားအရည်ခြောက်တယ် ဆိုလားပဲ ”
အဘ မိန်းမ နှင့် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ဆရာဝန်မ တစ်ယောက်ဟာ ၊
လူနာကြည့်လိုက် လက်ဆေးလိုက် လုပ်လိုက်တာ ၊
လက်တစ်ခုလုံး အရေခွံတွေ လန်နေတာ တွေ့ဖူးတယ် ။
အဟီး… အဲသည့် မီးဖိုချောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး အားကျလိုက်တာ…
ဝိုင်ဖန်ခွက်ကိုဘေးချပြီး အဲဒါမျိုးကြီးနဲ့ချက်လိုက်လို့ကတော့… တောက်စ်
ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင် တာတော့ ၀ါသနာပါတယ်
အိုးခွက် ပန်းကန် တွေတော့ ဆေးချင်ဘူး…
” ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင် တာတော့ ၀ါသနာပါတယ်
အိုးခွက် ပန်းကန် တွေတော့ ဆေးချင်ဘူး… ”
မအိ ရဲ့ ဒီဖက် နိုင်ငံတွေမှာက
အိုးခွက် ပန်းကန် တွေကို စက်နှင့်ဆေးတာလေ ။
င်္FRရဲ့ ခရီးသွားပိုစ့်တွေ ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတအများကြီးရတယ်။
မြင်ဖူးကြားဖူးထားတော့ တကယ်ထိတွေ့ရတဲ့အခါ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့။
(ကိုယ်လည်း တချိန်ချိန်မှာ မြန်မာပြည်ကတိုးရစ်မဖြစ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူးလေ)
” ကိုယ်လည်း တချိန်ချိန်မှာ မြန်မာပြည်ကတိုးရစ်မဖြစ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူးလေ ”
ဖြစ်ကို ဖြစ်မှာပါလေ ။
အမှန်က ၊ မမ တို့က ကျနော်တို့ထက် ချမ်းသာပါတယ် ။
ကျနော်တို့က ပိုက်ဆံလေး ၂ ပြား ၁ ပဲ လောက်ပဲရှိပြီးတော့ ၊
မ ချွေတာတတ်ဘဲ ၊ လျှောက် ဖြုန်းနေတာပါ ။
ခင်မောင်ထူးဆိုထားတဲ့ မြန်မာပြည်ကတိုးရစ်သီချင်းထဲကလို မြန်မာပြည်ကတိုးရစ်ဖြစ်ချင်နေတာ။
ပိုက်ဆံများရှိလို့ကတော့ မြန်မာပြည်ကတိုးရစ်ဆိုပြီး ကမ္ဘာပတ်ပစ်လိုက်မယ်။ (ထက်ထက်မိုးဦးလေသံဖြင့်ဖတ်ပါ)
ဗဟုသုတအများကြီးရသလို.. မြည်းချင်စိတ်တွေလည်း တားမရ ဆီးမရပါ.. :mrgreenn:: ချက်ထားသမျှ လေးနာရီကြာရင်လွင့်ပစ်တယ်ဆိုတော့ နှမျောလိုက်တာ.. သူများတို့များ ချက်ရတာကြာတဲ့ ဟင်းများဆို အများကြီးချက်.. ဘူးတွေထဲခွဲထည့်ထားပြီးတော့ ပြန်နွေးစားတယ်.. :))
” ချက်ထားသမျှ လေးနာရီကြာရင်လွင့်ပစ်တယ်ဆိုတော့ နှမျောလိုက်တာ ”
ဟုတ်ပါ့ ။ ကျနော် ဟင်းပြန်သိမ်းတဲ့ အချိန်ကို စောင့်ကြည့်ဘူးတယ် ။
တစ်ချို့ ဟင်းဗန်းတွေများ တစ်ဝက်ကျော် ကျန်သေးတယ် ။
အစားအသောက် ပုံဖေါ် အလှပြင်ထားတာလေးတော့ ချီးကျူးပါတယ်
ဒီလောက် လူနည်းနည်းလေး နှင့် ချက်နိုင်တာ အံ့သြမိပါရဲ့(ကျုပ်လည်းအလွန်အံ့သြမိဂျောင်း)
ဟင်း အမျိုးအမည်တွေကို ဘာတွေနှင့် ဘယ်လို တွဲစားရတာကို ရှင်းပြနေတာပါ3မှာတွေ့ရတာ
ဗွန်ဇိုင်းပင်ပန်းအိုးလေးနဲ့တူတယ်… Thank You
” ဒီလောက် လူအများကြီး ( ခရီးသည် ၂၈၀၀ ) စားဖို့ ကို ၊
ဒီလောက် လူနည်းနည်းလေး နှင့် ချက်နိုင်တာ အံ့သြမိပါရဲ့ ”
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ဦးမိုက် ရဲ့ ။
ဒီဖက်မှာက Ready to cook ဆိုတာ ဝယ်လို့ရတယ် ။
ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေ / အသားတွေကို ၊
အနေတော် လှီးဖြတ် သန့်စင် ဆေးကြောပြီးသား တွေ ။
ဟင်းအိုးထဲ တန်းထည့်ရုံ အခြေအနေ ရှိပြီးသားတွေဗျ ။
” ဗွန်ဇိုင်းပင်ပန်းအိုးလေးနဲ့တူတယ် ”
ဟုတ်ပါတယ် ဘွန်ဇိုင်းပင်လေးပါ ။
အခု မှ ဖတ်မိပြီး ဘဖော တို့ ကို အင်ထုပြီနဲ့ တူတယ် လို့ ..ready made တွေ များများထားပြီး လုပ်ပြီနဲ့ တူတယ် လို့ ပြောတော့ မလို့ .. လူ၂၈၀၀ သာ တကယ်ချက်ရရင် ဒီမီးဖိုတွေ အထူး သဖြင့် ကင်တဲ့ Griddle မျက်နှာပြင်တွေ က မီးအပူရှိန် နဲ့ ဒီလောက် သန့် နေဖြူနေတယ် ဆိုတော့ အသုံးမများပုံ ပေါက်နေတယ် ။ Grill မှာ ကြည့်ရင်လည်း ဖြူနေတဲ့ အပိုင်းလေး နဲနဲဘဲ တွေ့ ရတော့ ၀န်ထမ်း မီးဖိုချောင် ကများ ချက်ပြီးပို့နေလား မသိဘူး .. ဒါကတော့ ပြစားပေါ့ .. အဟိ .မကောင်းတာ .. ဗမာကျင့် ဗမာ ကြံ လိုထင်နေသေးတယ် .. မမြင်ဘူးတော့ ….. :hee:
ကို ထူးဆန်း ရဲ့ ။
အခုခေတ် ( Maritime Labour Convention 2006 ပေါ်ပြီးချိန် ) မှာ ၊
သင်္ဘောတွေပေါ်မှာ ၊ အဲလိုသန့်ပြန့်နေအောင် ထားရတယ် ဗျ ။
သူတို့ Chef တွေ ဇယ်ဆက်သလို အမြန် အလုပ်လုပ်နေတာတော့ တွေ့ရတာဘဲ ။
” အမျိုးအစားတူတဲ့ ဟင်းခွက်တွေကို တစ်ပြိုင်တည်း ကြိုပြင်နေပုံပါ ” ဆိုတဲ့ ပုံထဲက ၊
Chef ဆိုရင် တစ်ယောက်ထဲနှင့် ဗုံတီးသလို လုပ်နေရရှာတာ ။
ကျနော်တို့ဖက်ကို တစ်ချက်လှည့်ပြီး ပြုံးပြဖို့ နှုတ်ဆက်ဖို့ အချိန်မရှိရှာဘူး ။
” မီးဖိုချောင် Galley က အကျယ်ကြီးပါ ၊ လူအများကြီး ကျပ်ညပ် မနေပါဘူး ”
ဆိုတဲ့ ပုံထဲက ၊ မီးဖို အတွဲလိုက်ကြီးမျိုး ၁၀ တွဲလောက်တွေ့ခဲ့တယ် ။
အဲဒီလို မီးဖို အတွဲ တစ်တွဲကို Chef ၂ ယောက်စီလောက် လုပ်နေကြတယ် ။
မီးဖို တွေ ပြောင်လက်နေတာက အလုပ်ပြီးတိုင်း အကုန်တိုက်ချွတ်ဆေးရတယ်လေ ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ အခုခေတ် နိုင်ငံခြားသွား ကုန်တင်သင်္ဘောတွေရဲ့ ၊
မီးဖိုချောင် Galley တွေလဲ ၊ ဒီလိုဘဲ ပြောင်လက်နေမှ ရတော့တယ် ။
အဲလို ပြောင်လက် သန့်ရှင်းမနေရင် MLC 2006 နှင့် အဖမ်းခံရလိမ့်မယ် ။
” ဗမာကျင့် ဗမာကြံ လို ၊ ထင်နေသေးတယ် ”
ဒီ အတွေးကြီးကတော့ ၊ မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ ။
နိုင်ငံတကာ ရောက်မှတော့ ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ရမပေါ့ဗျာ ။
လိမ် ရင် ၊ ခို ရင် ၊ ပြုတ်သွားမပေါ့ ။
ကျွန်တော် က ဘဖော ပြောတဲ့ ပုံ ကို သာကြည့်ပြီးမှတ်ချက်ချတာပါ .. ဘဖော ပြောသလို အဲ့ဒီလို အတွဲ ၁၀ တွဲ လောက် ရှိတယ် ဆို အခုပုံ ကအနည်း ဆုံး အသုံးပြုထားတဲ့ အတွဲ ဖြစ်မည် ထင်ပါသည် ။ ဘယ်လောက် ပြောင်အောင် သုတ်သုတ် မီးအပူရှိန်နဲ့ Griddle မျက်နှာပြင် ကအရောင်ပြောင်းတတ်ပါတယ် .. အခု က မျက်နှာပြင် ကအသစ်နီးနီးဖြစ်နေလို့ ပါ ..ဆိုတော့ အခုမှ လဲထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ဘဖော ပြောတဲ့ အခြား အတွဲ တွေ မှာ အချက်များတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် လေ..
ဗမာကျင့် ဗမာကြံ လို့ ပြောတာ ..နောက်ပြောတာ ဘဖောရေ ..
ဒီမှာ က လူကြီးလာမယ် inspection လာမယ် ဆိုရင် ပြောင်နေအောင်လုပ်ပြထားပြီး နောက်ကွယ်မှတော့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတတ်ကျလို့ ပါ …
အိုဇာတာကောင်းခဲ့ရင်ဖြင့် ၈တူ နဲ့ တူတူ ဒီလိုကမ္ဘာလှည့်တိုးရစ် ဖြစ်လိုက်ချင်ပါသေးဒယ်..
(ထုတော့ မြန်မာပြည်က သင်္ဘောတောင် မစီးဖူးဖူးရယ်)ေိခိ
” အိုဇာတာကောင်းခဲ့ရင်ဖြင့် ၈တူ နဲ့ တူတူ ဒီလိုကမ္ဘာလှည့်တိုးရစ် ဖြစ်လိုက်ချင်ပါသေးဒယ် ”
သူပြောမှ အဘတောင် အားကျ စိတ်လည်သွားပြီ ။
သင်္ဘော အတူစီးဖို့ ” ၈တူ ” လိုက်ရှာဦးမှပါဘဲလေ ။
အဲဒီ ၈ကြီးစကားထဲဗမာလိုထည့်ထည့်ပြောရင်.. လူကြည့်ခံရသဗျ..
အဲဒီကျွန်းကြီးပေါ်မှာ.. အိမ်သာမှာ ရေဆွဲချရင်.. ရေက.. နာရီလက်တံအတိုင်းလည်ပြီးဆင်းသွားသလား..
၀က်အမြီးတွေကရော.. နာရီလက်တံအတိုင်းလား.. ပြောင်းပြန်အတိုင်းလား…
မီးဖိုချောင်က အလုပ်သမားတွေကို လိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်တာ
လူမျိုးစုံပါပဲလား ဘဖောရာ …
နယ်ပယ်စုံက ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုမှ ရွေးပြီးခန့်ထားလေသလားလို့တောင်
လုပ်ဇာတ်နဲ့ သန့်ရှင်းထားတာ မဟုတ်ဘဲ
နဂိုရှိလို့ နဂိုင်းထွက်နေတဲ့ မီးဖိုချောင်လို့ပဲ မြင်မိပါသဗျားး
ဂလိုမှန်းသိ .. နာစီးခဲ့တဲ့ သင်္ဘော.. Kitchen Tour လုပ်ခဲ့ပါတယ်.. ဟီး..
Kitchen ထဲ ဝင်ကြည့်ဖို့ မေ့နေလို့ ပြန်ခါနီးမှ အသည်းအသန် ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတယ်..
ရှယ်ပဲနော်.. မီးဖိုချောင်ထဲကို tour program ဆွဲထားတာ..